Sunday August 28, 2011 - 20:04:01 in Sheekooyin by Super Admin
Waxaa Xarunta Booliska ee Norway soo gaaray Afar Nin oo Kurdi ah iyo Mid Soomali ah , si ay Booliska qoxootinimo isugu dhiibaan . Sida caadiga ah qof walba waxaa la waydiiyaa Wadanka uu u dhashay iyo meesha uu ka yimid . Afartii Kurdida ahaa iyo m
Waxaa Xarunta Booliska ee Norway soo gaaray Afar Nin oo Kurdi ah iyo Mid Soomali ah , si ay Booliska qoxootinimo isugu dhiibaan . Sida caadiga ah qof walba waxaa la waydiiyaa Wadanka uu u dhashay iyo meesha uu ka yimid . Afartii Kurdida ahaa iyo midkii Soomaliga ayaa su,aalo la waydiiyey iyagoo la rabay oo kaliya in laga qoro wadamada ay u kala dhasheen: Kii ugu horeeyey waxa uu dhahay waxaan ahay Kurdi Ciraaqi Kii labaad waxa uu dhahay waxaan ahay Kurdi ii raani Kii sadaxaad waxa uu dhahay waxaan ahay Kurdi Turki Kii afaraad waxa uu dhahay waxaan ahay Kurdi Suuri